Muxuu ka yiri Van Dijk murunka ku dhex maray isaga iyo tababare Klopp kulankii Napoli?? – Gool FM
(England) 30 Luulyo 2019. Daafaca reer Holand ee Virgil van Dijk ayaa ka hadlay muranka dhex maray isaga iyo macalinka kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp inta lagu jiray kulankii saaxiibtinimo ay la ciyaareen Napoli.
Virgil van Dijk ayaa tilmaamay inay tahay arrin gaar ah ee u dhexeysay isaga iyo tababaraha, isagoo dhinaca kale xusay in mararka qaar ay tahay inaad qofka u sheegto runta.
Kooxda Liverpool ayaa guuldaro weyn oo 3-0 ah kala kulantay Napoli. Kaasoo ka tirsanaa kulamada ay Reds ugu diyaar garoobeyso xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020.
Kaddib goolka koowaad uu Lorenzo Insigne u dhaliyay koodiisa Napoli wuxuu muran xoogan dhex maray tababare Klopp iyo Virgil van Dijk, Inkastoo daafaca reer Holand uusan si toos ah mas’uul uga ahayn goolkan ka dhashay, hadana Klopp ayaa aaminsanaa in wax uun uu sameyn karay kahor inta uusan goolka ka dhalanin.
Hadaba wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu Van Dijk kaga hadlay arrintan wuxuuna yiri:
“Waxa dhacay waxay ahaayeen kaliya waxyaabaha inoo dhexeeya aniga iyo isaga”.
“Muhiim ma ahan in shaaca laga qaado waxa na dhex maray”.
“Mararka qaar waa inaad qofka u sheegtaa runta”.
Yeelkadeeda, Liverpool ayaa ku guuldareysatay inay badiso dhamaan kulamadii saaxiibtinimo ay ciyaartay, hadii ay ahaan lahaayeen kulamadii ay ku ciyaartay dalka Mareykanka ama kulankii Napoli, waxay barbaro gashay hal jeer, waxaana laga badiyay saddex jeer kale.